အသက်၁၃နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်(၅)လရှိခဲ့တဲ့ (၇)တန်းကျောင်းသူ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ် – Shwe Thoon 8 Online Media
November 20, 2020 November 20, 2020 shwe0Comments
မနေ့က ကျမဆေးခန်းကို ultrasound ကြည့်ဖို့သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့..ရင်သားတဖက်မရှိ တဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း.လူနာလို့ထင်မိတာပါ။နောက်တော့မှ..ကျမသမီးလေးရာသီ မလာတာ 3လလောက်ရှိပြီ..ဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့
..ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်က 5လပြည့်ခါနီးပါပြီ..း။ကလေးရဲ့ အသက်ကိုသေချာသိချင် လို့မွေးနေ့မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လ..ဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်က 5လ.. .ရှင်းရှင်းပြောရရင်.အမွှေးတောင်သေချာမပေါက်သေးတဲ့ .မျက်နှာ အေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး ကျမ ဘယ်ကနေ စပြောရမလည်းတောင်တွေးမရတော့ပါ
fbပေါ်မှာ ဟိုတလောကေ ခတ်စားနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့. မဟုတ်တဲ့ post ကို ဖတ်ပြီး..အမေကို..ဘောင်းဘီ ကိစ္စနှင့်ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေက သို့လောသို့လော ဖြစ်သည်…။ဒီအမေနှင့် လွှတ်ထားလို့မပြီး..ငါဝင်ပါမှ ဖြစ်မည် ဆိုပြီး ဆက်မေးမှ..ကျမ ဖင်ထိုင်ရက်ကျမတတ်..
တတန်းတည်းကျောင်းသား..သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အဆင့်လောက်တွေနှင့် ..အတူနေကြသည်တဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းရဲ့….ညဖက်စာကြည့်ချိန်တွေမှာ. ညဖက်အတန်းလွတ်တွေထဲသွားကြသော .အဲသလိုကလေးတွေ…တော်တော်များနေပုံရသည် .
.သူပြောတဲ့ ဘောင်းဘီယူဝတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကလည်း ရည်းစားမဟုတ်ပဲ အတူနေကြသည်တဲ့..ေ နာက်တတွဲကတော့ ရည်းစားပေါ့…7တန်းတွေနော် တခန်းထဲအတူတူ..ချိန်းနေကြသည်တဲ့..3တွဲ ကဲ..ကလေးမို့ တခါတလေမှား သလားလို့ကြိမ်ရေမေးတော့ .ကြိမ်ရေမနည်းတော့ပါ…
သမီးတို့အတနြးက..အဲသလို ကှိုကြ ကှတာနညြးတယြ 9တနြး 10တနြးဆိုပိုခွိနြးတှေ့ကှတာလို့ပှောတော့ ကမွ ပကလြကလြနြ ကခွငွလြာသညြ…မီတာခမွားလို့ ညဖကကြွောငြးအပေါထြပတြှေ မီးပိတထြားတော့ ဘိတှဖှဈေကုနကြှပှီထငြ…
.ဒါတောငြ…ကလေးကသှကလြကခြကွခြွာပုံ.သိပမြပေါဘြောဒြါဆောငကြှေးကလညြး..မနညြးပါ.တောရြုံမိဘ မထားနိုငတြဲ့အနအထေားပါ.. .ဘောဒြါနှင့ြ ကိုယပြိုငကြွောငြးတှဲ ဖှင့ထြားပါသညြ. သးသေးခွာခွာနရောလညြးမဟုတပြါ ဒီကိဈစမွိုးက…ကမွမှ ဖှင့မြပှောလငွြ. .ကိုယ့ကြလေးအတှငြးရေးမို့ ဖုနြးဖိရငြး..
အခှားမိဘ..သတိမထားမိဖှဈနမှောရော သားမှေးထားသူတှရေော…သမီးမှေးထားသူတှရေောကွောငြးထောငထြားကှသော..သူငယခြငွြး တှရေောကို သတငြးပေး ခငွရြွရြေးပါသညြ…လူနာကို ငဲ့ညာသောအားဖှငြ.အမေးအဖှမွေားကို.လွော့ရွရြေးပါသောလြညြး.ညနေ ဆေးခနြးက..အပှနမြှာ.ကမွ မလှုပနြိုငအြောငပြငြ.ကှောကစြရာ..အဖှမွေားရခဲ့ပါသညြ
fbပေါ်မှာ ဟိုတလောကေ ခတ်စားနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့. မဟုတ်တဲ့ post ကို ဖတ်ပြီး..အမေကို..ဘောင်းဘီ ကိစ္စနှင့်ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေက သို့လောသို့လော ဖြစ်သည်…။ဒီအမေနှင့် လွှတ်ထားလို့မပြီး..ငါဝင်ပါမှ ဖြစ်မည် ဆိုပြီး ဆက်မေးမှ..ကျမ ဖင်ထိုင်ရက်ကျမတတ်.
. တတန်းတည်းကျောင်းသား..သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အဆင့်လောက်တွေနှင့် ..အတူနေကြသည်တဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းရဲ့….ညဖက်စာကြည့်ချိန်တွေမှာ. ညဖက်အတန်းလွတ်တွေထဲသွားကြသော .အဲသလိုကလေးတွေ…တော်တော်များနေပုံရသည် ..
သမီးတို့အတန်းက..အဲသလို ကြိုက် ကြတာနည်းတယ် 9တန်း 10တန်းဆိုပိုချိန်းတွေ့ကြတာလို့ပြောတော့ ကျမ ပက်လက်လန် ကျချင်လာသည်…မီတာခများလို့ ညဖက်ကျ
← အမေဖြစ်သူ စတေးဟုမ်းကာလမှာ စားဖို့ အစားအစာတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ နဝရတ်
ပျော်ရွှင်မှုတွေရနိုင်ဖို့ အမျိုးသား 300 ကျော်ကို သူမနဲ့ပတ်သက်ဖို့ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး →